Ukuphulukana neMeko yeLifa leMveli yeHlabathi kuya kuthintela ukubuyiswa kwakhona kweLiverpool
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » inkcubeko » Ukuphulukana neMeko yeLifa leMveli yeHlabathi kuya kuthintela ukubuyiswa kwakhona kweLiverpool
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba ezahlukeneyo
Inkcubeko yokhenketho ngoku lishishini elikhulu, ngama-29% eemarike zokuhamba jikelele ezenza olu hlobo lohambo.
Abakhenkethi bamanye amazwe bachitha imali eninzi kakhulu ngokomndilili xa kuthelekiswa nabakhenkethi basekhaya.
ILiverpool ngoku imiselwe ukuphulukana nezibonelelo ezahlukeneyo ngenxa yesibhengezo samva nje.
ILiverpool ngoku kufuneka isebenze ngendlela ezisingatha ngayo ezi ndaba.
Ngelixa ibango lokhenketho lwasekhaya alunakuchaphazeleka ngamandla yi Ukuphulukana nenqanaba lelifa lemveli leLiverpool, imfuno yamazwe aphesheya inokuba ngabakhenkethi abaninzi bamazwe aphesheya batyelele iLiverpool ukuze bafumane inkcubeko kunye nembali yesixeko.
Inkcubeko yokhenketho ngoku lishishini elikhulu, ngama-29% eemarike zokuhamba jikelele ezenza olu hlobo lohambo. Ukuphulukana nenqanaba lelifa lemveli kunokususa isibheno senkcubeko yeLiverpool kwaye kukhokelele kubakhenkethi bamanye amazwe abatyelele ezinye iindawo zase-UK ezigcine le lebhile, njengeBath.
Abakhenkethi bamanye amazwe bachitha imali eninzi kakhulu ngokomndilili xa kuthelekiswa nabakhenkethi basekhaya. Ngokwedatha yomzi mveliso, kwi2019 (unyaka wokugqibela 'oqhelekileyo' wokhenketho), umndilili wenkcitho yezokhenketho phesheya kumhlali ngamnye ime kwi-US $ 1,057, ngelixa inkcitho yokhenketho lwasekhaya kumhlali ngamnye e-UK ime kwi-US $ 263 (GB £ 191).
Liverpool kufuneka itsale ukhenketho lwamazwe aphesheya kangangoko kunokwenzeka kule minyaka izayo kuthathelwa ingqalelo isixa esikhulu sengeniso esiyivelisayo. Ngenxa yobume belifa lemveli ngoku, iimfuno zamazwe ngamazwe zinokuchaphazeleka kakubi, kwaye ukubuyela kwimeko yesiqhelo kunokwandiswa.
ILiverpool ngoku imiselwe ukuphulukana nezibonelelo ezahlukeneyo ngenxa yesibhengezo samva nje. Njengoko sele kukhankanyiwe, ushicilelo olwandileyo kunye nokwazisa okuza nokuba yindawo yelifa lemveli emhlabeni kuyonyusa ukhenketho lwamanye amazwe kwaye lisebenza njengesixhobo esinamandla sokuthengisa ekufuneka isixeko sihlawule kancinci. Ukuba nenqanaba lelifa lemveli phantse lisebenza njengelebheli esemgangathweni kwintengiso yamanye amazwe ukuba ibonwe. Oku kunempembelelo ngakumbi kwimakethi enamandla yaseTshayina eyaziwayo ukuba iphenjelelwa ziimpawu ezibonisa umgangatho okanye ukugqwesa. Phantsi kwale meko, iindawo zelifa lemveli zikwanelungelo lokufumana inkxaso-mali yokhuseleko nolondolozo.
Utyelelo lwamazwe aphesheya ngebeluthathe ixesha ukuphinda lubekho emva kwalo bhubhane, kodwa oku kukhula kungathatha ixesha elide ukufumana kwakhona ngoku iLiverpool ilahlekelwe lilifa lemveli lehlabathi. Isixeko ngoku kufuneka sisebenze ngendlela ezisingatha ngayo ezi ndaba, nokuba kungokudala amaphulo amatsha entengiso kurhwebo lwamanye amazwe, okanye ngokukhawuleza ukubhenela kwesi sigqibo sokubuyisa umtsalane kwinkcubeko.